कालिकोटको बान्जडामा खानेपानीको हाहाकार
कालिकोट फागुन २० गते । कालिकोट जिल्लाको पलाता क्षेत्रमा पर्ने धौलागोह गाविस वडा नं. ५ स्थित बान्जडामा खानेपानीको हाहाकार हुँदा स्थानीय नागरिकहरुलाई सास्ती भएको छ । लामो समयदेखीको खडेरी तथा गाँउमा भएको निर्माणाधिन बुड्ने खानेपानी योजना दशकौँ बित्दा समेत नबनेपछि गाँउमा खानेपानीको हाहाकार हुँदा स्थानीय नागरिकहरुलाई निकै सास्ती भएको हो ।
धौलागोह गावि वडा नं. ५ बान्जडा निवासी स्थानीय रुगुविना प्याकुरेलले भन्नुभयो, तीन बर्षेनी खडेरीका साथै बर्षेनी खानेपानीको हाहाकार भएपनि धौलागोह गाविसमा संचालित बुड्ने खानेपानी आयोजना निर्माण नहुँदा निकै सास्ती पाएको बताउनुभयो । उहाँले दैनिक एक बट्टा भन्दा बढी पानी भर्न नपाईने गाँउमा नियम लगाउदा बच्चाबच्चीले मुख नधोएर विद्यालय जानु परेको बताउनुभयो । त्यही गाउँकी अर्की स्थानिय कलशा प्याकुरेलले पानी भर्नका लागि राती पनि बास बस्नु पर्ने समस्या रहेको बताउनुभयो । हामी रातीभर पनि धारामा बस बस्छौ । दिनमा पानी भर्न पालो नआएका अधिकांश स्थानिय नागरि।कहरु राती बास बसेर पानी भर्ने गरेका छन् ।
धौलागोहवासी स्थानीय नागरिकहरुले बर्षेनी खडेरीका कारण मुहानबाटै पानीको श्रोत सुक्दै आएपछि खानेपानीको हाहाकार झेन्दै आएका छन् । पाईपबाट थोपा थोपा खसेको पानी घण्टौ लाईनमा बसेर दैनिक एक बट्टा पानी भर्नुपर्ने समस्या रहेको छ । गाविसमा विग ९ बर्षदेखी निर्माणाधिन रहेको बुड्ने खानेपानी योजनामा वर्षेनी बजेट आउछ । थोरै बाँडीचुडी खान्छन त धेरै बजेट फ्रिज भएर जान्छ । जिल्ला खानेपानी सब डिभिजन कार्यालय कालिकोटका सुचना अधिकारी देवानन्द धितालले काम नहुँदा गत बर्षमात्र ५५ लाख बजेट फ्रिज गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बुड्ने खानेपानी योजना निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नै धौलागोह गाविस सचिव बिष्णुकान्त प्याकुरेल हुनुहुन्छ । यो बर्ष पनि उक्त खानेपानी आयोजनामा मात्र ५० हजार बजेट छ । गत बर्ष नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना काम नहँुदा बजेट फ्रिज भयो ।
यता गाविस सचिव तथा बुड्ने खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिष्णुकान्त प्याकुरेलले अबको तीन महिनाभित्र गाँउमा खानेपानी पुर्याउने बताउनुहुन्छ । उहाँले गाँउका स्थानिय नागरिकहरुले काम गर्न नगएका कारण काम ढिलाई भएको आरोप लगाउनुहुन्छ । गाँउमा स्थानीय नागरिकहरु भने गाविस सचिव आफै खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर रकम अनियमितता गरेको र पहिले काम गरेका मजदुरहरुले पैसा नपाएको उनीहरुको आरोप छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले उक्त खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न कति बजेट आवश्यक पर्छ तत्काल व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
इजरायलका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रध�